HTML behaviour issue | The ASP.NET Forums
HTML behaviour issue [Answered]RSS
Last post Sep 12, 2017 01:00 PM by arnabjee
HTML behaviour issue
Sep 08, 2017 11:05 AM|arnabjee|LINK
Cannot figure out why these 2 htmls are behaving differently in browser (tested in Chrome)
-webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .05);
box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .05);
background-image: -khtml-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ffffff), to(#dde0e3));
background-image: -moz-linear-gradient(top, #ffffff, #dde0e3);
/* FF 3.6+ */
background-image: -ms-linear-gradient(top, #ffffff, #dde0e3);
background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #ffffff), color-stop(100%, #dde0e3));
/* Safari 4+, Chrome 2+ */
background-image: -webkit-linear-gradient(top, #ffffff, #dde0e3);
background-image: -o-linear-gradient(top, #ffffff, #dde0e3);
/* Opera 11.10 */
background-image: linear-gradient(top, #ffffff, #dde0e3);
/* The standard */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ffffff', endColorstr='#dde0e3', GradientType=0);
/* IE9 and down */
-webkit-box-shadow: 0 1px 0 #ffffff;
-moz-box-shadow: 0 1px 0 #ffffff;
box-shadow: 0 1px 0 #ffffff;
color: #262626 !important;
border-bottom: 2px solid #525c66;
border-top: 2px solid #525c66;
/*padding-right: 19px;  ==== edit on 12-05-2017
border-bottom: 1px solid #525c66;
border-top: 1px solid #525c66;
/* z-index: 10000; */
/*padding:0 20px 4px 0;  */ /*AG 24052017 */
padding:0 6px 4px 0;
border-top: 1px double #525c66; /*#DDDDDD;*/
border-bottom: 1px double  #525c66;
/*padding-right:20px  ; */  /* AG 24052017 */
<div id="divReportGenerate" class="gridBody" style="padding: 25px 35px; width:100%; min-width: 880px;"><div><table style="margin-top:10px; width:100%;"><tbody><tr class="rptTitle"><td colspan="2">Sales Invoice Report</td></tr><tr><td class="rptHeadLabel" colspan="2" style="width:580px;">NEW_MULTI_DIV_SUB DIV_TIME</td></tr></tbody></table></div><div style="display:inline-block; vertical-align:top;min-width:810px;width:100%;height:364px;overflow-x:auto;overflow-y:hidden; margin:8px 0;"> <div id="flexheightdep" style="display: inline-block; vertical-align: top; min-width: 815px; width: 100%; height: 40px; padding-right: 17px;"> <table cellpadding="5" class="pearl" style="min-width:930px;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;width:100%;border-bottom: 2px solid #525c66;border-top: 2px solid #525c66;"><colgroup style="width:100px"></colgroup><colgroup style="width:110px"></colgroup><thead style="display:table-header-group;height: 20px;"><tr><th style="page-break-inside: avoid;" class="rptColHeadingLeft">Date</th><th class="rptColHeadingRight">Allocated</th></tr></thead></table></div><br><div id="flexheight" style="display:inline-block;vertical-align:top;height:306px;min-width:810px;overflow-y:auto;overflow-x:hidden;"><table cellpadding="5" style="min-width:930px; table-layout:fixed;/*border-left: 1px solid #DDDDDD;*/border-collapse:collapse;/*border-right: 1px solid #DDDDDD;*/border-collapse:collapse;border-bottom: 1px solid #DDDDDD;border-collapse:collapse;width: 100%;"><colgroup style="width:100px"></colgroup><colgroup style="width:110px"></colgroup><tbody><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">08/11/2016</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">08/11/2016</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">15/11/2016</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">10/12/2016</td><td class="rptBodyNumber">€300.00</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">11/12/2016</td><td class="rptBodyNumber">€246.00</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">01/01/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">08/01/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">09/01/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">06/02/2017</td><td class="rptBodyNumber">€123.00</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">06/02/2017</td><td class="rptBodyNumber">€150.00</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">09/02/2017</td><td class="rptBodyNumber">€221.40</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">10/02/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">10/02/2017</td><td class="rptBodyNumber">€185.73</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">22/02/2017</td><td class="rptBodyNumber">€153.75</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">03/03/2017</td><td class="rptBodyNumber">€1,869.60</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">03/03/2017</td><td class="rptBodyNumber">€86.10</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">03/03/2017</td><td class="rptBodyNumber">€1,113.90</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">04/04/2017</td><td class="rptBodyNumber">€86.10</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">04/04/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">11/04/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">18/04/2017</td><td class="rptBodyNumber">€86.10</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">18/04/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">25/04/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">30/04/2017</td><td class="rptBodyNumber">€200.00</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">02/05/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">03/05/2017</td><td class="rptBodyNumber">€123.00</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">03/05/2017</td><td class="rptBodyNumber">€934.80</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">09/05/2017</td><td class="rptBodyNumber">R50.00</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">09/05/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">11/05/2017</td><td class="rptBodyNumber">€400.00</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">01/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">R-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">01/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">01/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">01/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">08/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">08/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">08/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">15/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">15/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">R-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">15/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">15/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">15/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">20/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€600.00</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">20/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">21/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">22/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">R-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">22/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">22/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">22/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€1,537.50</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">22/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">22/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">27/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">R50.00</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">27/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€1,968.00</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">28/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€12.30</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">28/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">28/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€1,482.15</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">01/07/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">01/07/2017</td><td class="rptBodyNumber" style="padding-right:4px;">-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">03/07/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">05/07/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">05/07/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">06/07/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">06/07/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">08/07/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">08/07/2017</td><td class="rptBodyNumber" style="padding-right:4px;">-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">11/07/2017</td><td class="rptBodyNumber" style="padding-right:4px;">-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">11/07/2017</td><td class="rptBodyNumber" style="padding-right:4px;">-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">15/07/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">15/07/2017</td><td class="rptBodyNumber" style="padding-right:4px;">-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">17/07/2017</td><td class="rptBodyNumber">R-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">17/07/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">18/07/2017</td><td class="rptBodyNumber" style="padding-right:4px;">-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">18/07/2017</td><td class="rptBodyNumber" style="padding-right:4px;">-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">19/07/2017</td><td class="rptBodyNumber">R-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">19/07/2017</td><td class="rptBodyNumber">R-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">19/07/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">21/07/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">22/07/2017</td><td class="rptBodyNumber" style="padding-right:4px;">-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">25/07/2017</td><td class="rptBodyNumber" style="padding-right:4px;">-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">25/07/2017</td><td class="rptBodyNumber" style="padding-right:4px;">-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">29/07/2017</td><td class="rptBodyNumber" style="padding-right:4px;">-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">31/07/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">01/08/2017</td><td class="rptBodyNumber" style="padding-right:4px;">-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">01/08/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">01/08/2017</td><td class="rptBodyNumber" style="padding-right:4px;">-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">01/08/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">04/08/2017</td><td class="rptBodyNumber">R8,759.69</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">04/08/2017</td><td class="rptBodyNumber">R8,759.69</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptGrandTotLabel" colspan="1">Totals:</td><td style="page-break-inside: avoid;"></td></tr></tbody></table></div></div><div style="margin-top: 8px;"><table style="width:100%;"><tbody><tr><td class="rptFooterLabel" style="font-size: 11px;width: 66px;padding: 0;">Printed By</td><td style="width:800px;font-size: 11px;"></td><td></td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="divReportGenerate" class="gridBody" style="padding: 25px 35px; width:100%; min-width: 880px;"><div><table style="margin-top:10px; width:100%;"><tbody><tr class="rptTitle"><td colspan="2">Sales Credit Note Report</td></tr><tr><td class="rptHeadLabel" colspan="2" style="width:580px;">NEW_MULTI_DIV_SUB DIV_TIME</td></tr></tbody></table></div><div style="display:inline-block; vertical-align:top;min-width:810px;width:100%;height:364px;overflow-x:auto;overflow-y:hidden; margin:8px 0;"> <div id="flexheightdep" style="display: inline-block; vertical-align: top; min-width: 815px; width: 100%; height: 40px; padding-right: 17px;"> <table cellpadding="5" class="pearl" style="min-width:930px;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;width:100%;border-bottom: 2px solid #525c66;border-top: 2px solid #525c66;"><colgroup style="width:100px"></colgroup><colgroup style="width:110px"></colgroup><thead style="display:table-header-group;height: 20px;"><tr><th style="page-break-inside: avoid;" class="rptColHeadingLeft">Date</th><th class="rptColHeadingRight">Allocated</th></tr></thead></table></div><div id="flexheight" style="display:inline-block;vertical-align:top;height:306px;min-width:810px;overflow-y:auto;overflow-x:hidden;"><table cellpadding="5" style="min-width:930px; table-layout:fixed;/*border-left: 1px solid #DDDDDD;*/border-collapse:collapse;/*border-right: 1px solid #DDDDDD;*/border-collapse:collapse;border-bottom: 1px solid #DDDDDD;border-collapse:collapse;width: 100%;"><colgroup style="width:100px"></colgroup><colgroup style="width:110px"></colgroup><tbody><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">06/02/2017</td><td class="rptBodyNumber">€</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">03/03/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-84.50</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">03/05/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-123.00</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">03/05/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-1,402.20</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">04/05/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">05/05/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">05/05/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">12/05/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">26/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">R-50.00</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">26/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-246.00</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">26/06/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;" class="DataRow"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptBodyText">04/08/2017</td><td class="rptBodyNumber">€-</td></tr><tr style="page-break-inside: avoid;"><td style="page-break-inside: avoid;" class="rptGrandTotLabel" colspan="1">Totals:</td><td style="page-break-inside: avoid;"></td><td style="page-break-inside: avoid;padding-right:4px;" class="rptGrandTotData">€-1,997.95</td></tr></tbody></table></div></div><div style="margin-top: 8px;"><table style="width:100%;"><tbody><tr><td class="rptFooterLabel" style="font-size: 11px;width: 66px;padding: 0;">Printed By</td><td style="width:800px;font-size: 11px;"></td><td></td></tr></tbody></table></div></div>
Re: HTML behaviour issue
Sep 08, 2017 12:43 PM|mgebhard|LINK
Can you explain the problem you are trying to solve? What is the expected behavior? Which browsers are you referring to? Are you asking the community to compare the two files?
Sep 08, 2017 04:33 PM|arnabjee|LINK
Thanks for your reply. In browser like Google Chrome in one html the second column is showing right-aligned whereas in the other html the second column is close to the first column although to me the two html markups look similar. Yes I was requesting for a kind of comparison and spot the difference.
Sep 08, 2017 04:41 PM|PatriceSc|LINK
I would try a tool such as https://www.diffchecker.com/ or F12 Styles in my browser to see which style differs...
Sep 12, 2017 03:13 AM|Zhi Lv - MSFT|LINK
The issue is related to the last row of the table. Please check the HTML elements, in the second html, the last row contains three cells, but previous rows just contain two cells.
Try to modify your code as below: remove one cell or comment out the cell.
<td style="page-break-inside: avoid;" class="rptGrandTotLabel" colspan="1">Totals:</td>
<%--    <td style="page-break-inside: avoid;"></td> --%>
<td style="page-break-inside: avoid; padding-right: 4px;" class="rptGrandTotData">€-1,997.95</td>
Sep 12, 2017 01:00 PM|arnabjee|LINK
Thanks Dillion got it.